10 सर्वश्रेष्ठ बेकरी मा युरोप प्रयास गर्नुहोस् लागि | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 सर्वश्रेष्ठ बेकरी मा युरोप प्रयास गर्नुहोस् लागि
एक मिठाई दाँत संग यात्री, ध्यान देउ! तपाईं विचार सक्छ युरोप मार्फत यात्रा बस मिठाईहरू प्रयास खातिर, तर तपाईं गर्नुपर्छ. युरोप नजिक भएको तपाईं ल्याउनेछ केही शानदार व्यञ्जनहरु छ संस्कृति देश को तपाईं अन्वेषण हुनुहुन्छ. प्लस, तिनीहरूले आफ्नो स्वाद तन्तु प्रसन्न छौँ. के प्रेम होइन?
विचार चाखलाग्दा सुनिन्छ भने प्रयास र तपाईं कहाँ सुरु गर्न सोच हुनुहुन्छ पर्याप्त, fret छैन. तपाईं निर्णय गर्न मद्दत गर्न, हामी को एक मिठाई सूची संकलित गर्नुभएको 10 युरोप आफ्नो यात्रा मा प्रयास सर्वश्रेष्ठ बेकरी. का तिनीहरूलाई नियालेर गरौं:
1. एम्स्टर्डम, को नेदरल्यान्ड्स - मेरो साना Patisserie
यो राम्रो बनाएको सामना गर्न दुर्लभ छ फ्रान्सेली व्यञ्जनहरु अन्य देशहरूमा, तर कुनै चिन्ता छैन - यो रोटी फ्रान्सेली छ. मेरो साना Patisserie मीठो दाँत फ्रान्सेली Delights सबै प्रकारका प्रदान गर्दछ, chouquettes र eclairs सहित, अन्य संरक्षित बीचमा.
एक परम्परागत फ्रान्सेली डिजाइन, मेरो साना Patisserie पूर्ण डच सेटिङ फ्रान्स आत्मा evokes. अरु के छ त, तिनीहरूले पनि आफ्नो इच्छाहरू पूरा गर्न असफल कहिल्यै परम्परागत फ्रान्सेली व्यञ्जनहरु प्रयोग. तपाईं आफूलाई पाउन भने यो ठाउँ नछुटाउनुहोस् एम्स्टर्डम!
2. रोम, इटाली - बेकरी हाउस
यो बेकरी अर्को जस्तो देखिने माछा-बाहिर-को-पानी अवस्था छ, यो इटालियन पेस्ट्री बारेमा सबै छैन रूपमा. सट्टा, बेकरी हाउस cupcakes मा माहिर, हुन सक्छ कि एक कडाई अमेरिकी मनपर्ने आविष्कार त्यसैले स्वादिष्ट तपाईं छोड्न चाहनुहुन्छ कहिल्यै पनि.
बेकरी हाउस बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा स्वाद को विविधता छ, कम्तिमा जहाँ आफ्नो स्वाद तन्तु चिन्तित हुनुहुन्छ. तर यो असम्भव छ किनकि एक Cupcake प्रयास मात्र, आफ्नो समुद्र तट शरीर धन्यवाद छैन. तथापि, यी cupcakes को क्यालोरी बन्द बाल्न जिम मा एक अतिरिक्त केही घण्टा खर्च लायक हुन सक्छ.
3. रोम, इटाली - Biscottificio Innocenti
तपाईं को लागि तिर्सना हुनुहुन्छ भने कडाई इटालियन मिठाईहरू, Biscottificio Innocenti तपाईं निराश छैन. यो साँचो बीचमा आफ्नो ठाउँमा योग्य 10 यसको biscotti युरोप धन्यवाद आफ्नो यात्रा मा प्रयास सर्वश्रेष्ठ बेकरी. यो एक विशाल ओभनको साथ सानो पसल हो जुन तपाईंले बनाउनुहुने सबैभन्दा स्वादिष्ट बिस्कुटहरू उत्पादन गर्दछ इटाली मा प्रयास गर्नुहोस्.
र तपाईं तिनीहरूलाई कहीं लागि नुस्खा फेला हुनेछ - Biscottificio यसको रहस्य राख्छ. बनाउन नमूना निश्चित आफ्नो Brutti MA Buoni. यो एक पिरामिड आकारको एक बिस्कुट तपाईं को पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्षम हुने छैन भन्ने छ.
4. पेरिस, फ्रान्स - रोटी र केही विचार
यो अद्भुत पेरिसियन बेकरी को नाम अनुवाद रोटी र विचार, जसको लागि एक प्रेरित नाम हो प्रेरक खाना. र गर्दा आफ्नो नाम रोटी मा एक विशेषज्ञता implies, तिनीहरूले प्रस्ताव सबै छैन.
तपाईं पनि आफ्नो croissants आनन्द उठाउन सक्छौं! यी सुखा सामान पेरिस मा सबै भन्दा राम्रो croissants हुनुको प्रतिष्ठा छ. जब मा पेरिस, युरोप मा सबै भन्दा राम्रो बेकरी को एक सम्झना छैन.
5. म्यूनिख, जर्मनी - क्याफेटेरिया कफी फास्ट
म्यूनिख को मान्छे आफ्नो पेस्ट्री प्रेम, र उच्च Konditorei Kaffee Schneller लागि तिनीहरूले छन् सन्दर्भमा देखि स्पष्ट छ. तर किन यो एक हो 10 प्रयास गर्नुहोस् लागि सर्वश्रेष्ठ बेकरी तपाईंको यात्रा युरोप?
तपाईं एक dreadfully व्यस्त मार्फत trudge पछि, उदास र लत्तो सोमवार, तपाईं आफ्नो आत्माको उचाल्न कुरा आवश्यक. तपाईं म्यूनिख हुनुहुन्छ भने, जवाफ स्वादिष्ट मा निहित, घर पेस्ट्री. तपाईं छिटो कफी मा findthose गर्न सक्नुहुन्छ, एक छेउमा cappuccino को सान्त्वनादायी तातो कप वा कोका. प्राय भन्दा छैन, तपाईं सबै यो भ्रमण गर्न बहाना आवश्यक छैन.
6. ज्यूरिख, स्विट्जरल्याण्ड - Conditorei Schober
ज्यूरिख युरोप मा सबै भन्दा राम्रो बेकरी लागि हेर्न निश्चित स्थान छ. स्विस छ ठूलो चकलेट र अझ राम्रो केक कालिगढहरु कि पक्कै पनि तपाईंलाई प्रभावित हुनेछ. Conditorei Schober तपाईं पुरानो टाउन को "मीठो कुना" मा पाउन सक्नुहुन्छ बेकरी को छ.
यो एक परम्परागत-देख छ सानो क्याफे सबैभन्दा अचम्मको पेस्ट्री र तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ हस्तनिर्मित चकलेट केही छ. सुन्दर सजावट, ठूलो मिठाईहरू, र एउटा आँगन को गर्मी मा आनन्द प्रेम के होइन -?
7. ज्यूरिख, स्विट्जरल्याण्ड - CONFISERIE Sprungli
हामी अझै ज्यूरिख संग गरेको गरिरहनु भएको छैन! त्यहाँ थप एक युरोप मा सबै भन्दा राम्रो बेकरी को सूची मा उल्लेख गर्न लायक ठाउँ छ. शहर मा prettiest क्याफे रूपमा मानिन्छ, CONFISERIE Sprungli एकदम ज्यूरिखको प्रसिद्ध छ.
भनी प्रसिद्ध गरिएका विशेषता भएको Luxemburgli छ macaroons, तर आफ्नो चकलेट साथै शानदार छ. आफ्नो संरक्षित आफ्नो सबै सचेत गाउन निश्चिन्त छन्. तपाईं Luxemburgli macarons प्रयास बिना CONFISERIE Sprungli भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न!
8. डेनिस बेकरी - Kaffehuset - कोपेनहेगन, डेनमार्क
तपाईं यसलाई बनाउन मा डेनिस छन् कसरी कुशल चिनन बिना पेस्ट्री उल्लेख गर्न सक्दैन. यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो बेकरी बीच कोपेनहेगन देखि एक डेनिस बेकरी फेला पार्न कुनै आश्चर्य छ किन कि छ. को Kaffehuset स्थानका लागि निश्चित दावेदार हो, र तिनीहरूले मुख-टीन पेस्ट्री धन्यवाद यो जीत.
विद्यार्थीहरू कोपेनहेगन पक्षमा Kaffehuset गरेको cheesecake, यो शहर मा सबै भन्दा रमणीय र सबै भन्दा स्वादिष्ट cheesecake हुन चिनिने रूपमा. तपाईं आफ्नो आकर्षणलाई तिरस्कार गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं सम्भवत असफल छौँ - र धेरै खुसी तपाईं गरे कि हुन.
9. लन्डन, इङ्गल्याण्ड - Lauderee
मीठो फ्रान्सेली Delights यसको नाम गरेका अर्को बाहिर-को-फ्रान्स युरोपेली बेकरी, Lauderee तपाईं मोहीतपार्नु Name हुनेछ. Londoners यो स्थान पुजा गर्नु, र तिमी पनि एक पटक हुनेछ तपाईं लन्डन भ्रमण पहिलो पटक.
Macarons आफ्नो विशेषता हो, र तपाईं आफ्नो फ्रान्सेली समकक्षों तिनीहरूलाई अलग बताउन सक्ने छैनन्. तपाईं प्यास्टेल-रंग खोल कमी पछि macaron भित्र क्रीम आफ्नो मुख मा ढल्छ हुनेछ. यो भन्दा कुनै पनि राम्रो प्राप्त गर्दैन!
10. भियना, अस्ट्रिया - Demel
Demel एउटा कारण लागि प्रसिद्ध मिठाई भियना मा स्थापना हो - आफ्नो केक. को एना Demal Torte Demel उत्तम प्रतिष्ठा लागि मुख्य कारण मध्ये एक छ कि एक सोपानकृत चकलेट showstopper छ.
Demel सिर्फ एक पर्यटक मनपर्ने भन्दा बढी छ - यसको इतिहास माथि छ 230 वर्ष लामो, आकर्षक र प्रभावशाली छ. को संरक्षित केही तपाईं त्यहाँ अखरोट केक छन् आनन्द उठाउन सक्छौं, इस्टरह्याजी केक, Sachertorte, र Dobos केक. छोटकरीमा, तपाईं केक को आफ्नो दैनिक खुराक खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Demel भन्दा कुनै थप हेर्न.
एक अविस्मरणीय छ गर्न तयार (र स्वादिष्ट) आफ्नो सम्पूर्ण परिवारसँग छुट्टी? हाम्रो सूचीबाट युरोप मा दस सर्वश्रेष्ठ बेकरी भ्रमण, र तपाईं टाढा Blown गरिने. बनाउन आफ्नो छुट्टी योजना निश्चित र तपाईंको रेल टिकट बुक समयमा!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सर्वश्रेष्ठ बेकरी तपाईंको यात्रा युरोप मा प्रयास गर्नुहोस् लागि ” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-best-bakeries-europe%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#बेकरीहरू #बेकरी #मरुभूमि #पेस्ट्री लन्डन ट्राभेलमस्टरडम travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands यातायात स्विट्जरल्याण्ड